Gini bu ahia ahia? | ECommerce ozi ọma
N'ezie, enwere ọtụtụ ụzọ iji gakwuru ahịa n'ime ụlọ ọrụ e-commerce. Ọ bụ ezie na otu n'ime ihe kachasị dị irè bụ na ọ sitere n'akụkụ dị mkpa dị ka ahịa ahịa. Ma ànyị maara n'ezie ihe okwu a nwere? Ọfọn, ekwesịrị ịkọwa ya n'ihi na ọ nwere ike ịbụ nnukwu ịba uru maka ndị ọrụ site ugbu a gaa na maka ebumnuche dị iche iche anyị ga-eme ka o doo anya.
Mobile Mobile bụ usoro nke usoro na usoro iji kwalite ngwaahịa na ọrụ na-eji ngwaọrụ mkpanaaka dịka ọwa nkwukọrịta. A makwaara ya dị ka ịzụ ahịa mkpanaka na okwu a na-eme ka ihe ezi ebumnuche gị dị na ngalaba nke mmepụta nke ndị a na-anọchi anya ụlọ ahịa mebere ma ọ bụ ụlọ ahịa. Site na nke a, a ga-enwe ọtụtụ onyinye nke usoro ịre ahịa a pụrụ iche ga-enye anyị.
Iji mezuo ebumnuche anyị n'ime ahịa a na-akpọ mkpanaka ọ ga-adị ezigbo mkpa na site na mbido anyị doro anya banyere ụfọdụ ụzọ dị mkpa. Otu n'ime ha bụ na ọ ga-abụ ihe dị ezigbo mkpa kọwaa ma mepụta mmekọrịta ọhụrụ anyị na ndị ahịa mkpanaka anyị. Ya mere na ị nwere ike ịga site na ntụgharị site na ụlọ ahịa anụ ahụ gaa na ntanetị. Na uzo siri ike ma nwekwaa ezi uche nke puru irite uru nke ndi ozo ndi so n’usoro puru iche a.
1 Mobile ahịa: ọnọdụ ahịa
2 Uru ụlọ ọrụ si na atụmatụ azụmaahịa a
3 Ohere ịmebata ahịa Mobile
4 Iwu maka iji usoro ahia a
Mobile ahịa: ọnọdụ ahịa
Ọmụmụ ihe ọhụrụ nke IAB Spain bipụtara na-enye data nwere ike ịmasị mmasị banyere Mobile Mobile na Spain ma gosipụta oke oriri nke ịntanetị sitere na ngwaọrụ mkpanaka n'afọ gara aga. Ọ bụghị naanị site na ekwentị mkpanaaka, ma ọ bụrụ na ọ bụghị site na teknụzụ ndị ọzọ dị elu karị, dị ka mbadamba nkume ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ nke teknụzụ nwere àgwà ndị yiri ya.
Ndị a na-egosi na 78% nke ndị ọrụ Spanish na-elele email ha site na ngwaọrụ mkpanaka ha. Mana nke kachasị dị mkpa, 58% nke ndị ọrụ na-akpọtụrụ mkpanaka ha maka ozi ndị ọzọ tupu ịmalite ịga zụọ ahụ. Nke ahụ bụ, mmetụta ya na-ekpebi usoro nzụta na-abawanye mmejuputa ya na klas a nke ọwa maka azụmahịa nke ngwaahịa, ọrụ anyị ma ọ bụ isiokwu anyị.
N'aka nke ọzọ, ọ dịkwa ezigbo mkpa iji eziokwu ahụ kpọrọ ihe na iji ụzọ ntanetị ịntanetị eme ihe enweghị ike ịtụlekwa ọwa ọzọ maka ọdịnihu, mana kama ọ bụ ugbu a nke dijitalụ ma ọ bụ ahịa n'ịntanetị. Site na usoro a, ọ dị ezigbo mkpa ịmegharị ihe ọhụrụ ahụ mkpa ndị ahịa ugbu a. Ma ihe kacha dị mkpa n'oge a: bulie ikike gị iji mepụta ya nke nta nke nta na afọ ole na ole gara aga.
Dị ka ihe nzuzo nke ọdịdị nke ngwa mkpanaka na klaasị azụmaahịa a. N'echiche a, enweghị ike ichefu na ngwa ndị a na-amasị ihe ụlọ ọrụ nke ihe ọhụrụ ma ọ bụ, na okwu ndị ọzọ, na-eme ka mmepe nke ụdị azụmaahịa dịkwuo mma. Nwere ọtụtụ mmetụta enwere ike ịchọpụta na azụmaahịa kọmputa gị site ugbu a gaa n'ihu, dịka ndị anyị ga-ekpughe n'okpuru:
Na-ebuli arụmọrụ nke ika ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa.
Ọ na - enyere aka belata ọnụ ahịa nke ụlọ ọrụ dijitalụ ndị a.
Ha na-akwalite ahịa site na ọtụtụ usoro azụmahịa dị iche iche.
Dịkwa ka njedebe ikpeazụ, enweghị ike ichefu na ọnụnọ nke ụlọ ọrụ ndị a ka enyere nnukwu visibiliti.
Uru ụlọ ọrụ si na atụmatụ azụmaahịa a
Mobile Mobile bụ ụzọ dị iche iche nke isi gbanwee mmekọrịta dị n'etiti mgbasa ozi dijitalụ na ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ. Ruo n'ókè ọ na-enye nduzi ọhụrụ maka omume ndị nwere ike ịmasị ndị ọrụ niile metụtara azụmaahịa a. N'echiche a, enweghị ike ichefu ya n'oge a na ntinye ekwentị agbanweela àgwà oriri, ọ bụghị ná mba ọ bụla kama n'ụwa nile. Na onyinye dị mkpa dị ka ihe ndị a:
Ozugbo e mepụtara usoro ịzụ ahịa zuru ụwa ọnụ, ịnwere ike ikewa ndị na-ege gị ntị na ịmepụta mkpọsa maka usoro ọ bụla, site na mma gaa na ntughari.
Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo nchekwa data, ị nwere ike ịhazi mmekọrịta karịa. Ruo n'ókè na n'ikpeazụ ị nwere ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ ahịa nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe gị, ọbụlagodi site na ọkwa echeghị na afọ ole na ole.
N'ezie, ị ga-enyocha na ọ bụ usoro dị ọnụ ala karịa ahịa azụmaahịa ma yabụ ọ nwere ike ịbụ mmụba ma e jiri ya tụnyere ya mma nloghachi na ego. Nke ahụ bụ, yabụ ka ị ghọta ya nke ọma, ọ bụ sistemụ nke ga-abawanye uru site na echiche akụ na ụba.
Ọ bụrụ na ejiri akara ihe mara ihe, ọ bụ site na nnweta ya ka ukwuu, ma ọ bụ ihe dị otu, ọ nwere ike ịbịakwute ọtụtụ mmadụ na n'ezie karịa karịa ụdị ọdịnala ma ọ bụ nke ọdịnala.
N'ime usoro mgbasa ozi teknụzụ mgbasa ozi, ihe ọzọ dị mkpa dị na ya bụ na ọ gụnyere oke na elu na a akwa nje. Nke a bụ ihe dị iche na ahịa Mobile site na ụdị ndị ọzọ nwere njirimara yiri ya.
N'ikpeazụ, dị ka nnukwu ihe ọhụrụ, ọ na-enye ndị nwere mmasị ebe a na-akpọ geolocation ohere. Nke a na omume bụ ihe dị mma dị ka ịnye ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ nkọwa zuru ezu na nke onwe.
Ohere ịmebata ahịa Mobile
Akụkụ ọzọ kachasị mkpa n'ime isiokwu a bụ maka etu esi emejuputa usoro ahia ọhụụ a. N'echiche a, dịka ị ga-ahụ, ọwa ị nwere ike iji site ugbu a gaa n'ihu dị iche. Fọdụ ndị na-agbanwe agbanwe na ndị ọzọ nwere ọdịnala, mana na n'ọnọdụ niile mejupụta otu ebumnobi: ha na-eje ozi iwebata uzo ahia ahia a. Dịka ọmụmaatụ, site na ngwa ndị a anyị na-ekpughere gị n'okpuru:
Ihe kachasị dị mfe ma dịkarịa ala nke ihe niile bụ ozi ederede na site na nke a ị nwere ike itinye usoro a n'ime azụmahịa dijitalụ. Ọ bụ oghe niile profaịlụ onye ọrụ na nke a bụ nnukwu uru ya na usoro ndị ọzọ dị elu.
Email: nke njirimara yiri nke gara aga, ọ bụ ezie na ọ na-eweta ụfọdụ echiche dị iche iche. Ọ nwere ihu ọma ya na imirikiti ndị ọrụ na-agụ ozi ịntanetị ha site na ngwaọrụ mkpanaka. Nke a na - eme ka ọ dị mfe maka ozi iji rute ndị nnata ha, ọ bụ ezie na itinye ụfọdụ nzacha iji jide n'aka na ha bụ ezigbo ebumnuche.
Netwọk mmekọrịta: ọ bụ usoro kachasị ọhụrụ iji nweta nsonaazụ kacha mma site na sistemụ a. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọnụnọ ndị ọrụ n'ụdị nnọkọ mmekọrịta a na-eto ma na-aga n'ihu kwa afọ. Ruo n'ókè ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya ahaziri iche na nke ọ bụla dijitalụ n'elu ikpo okwu na ya mere ozi ahaziri ka ndị ọzọ na usoro. Na ọtụtụ ohere ndị ọzọ ị na-emekọrịta na atụmanya dị elu nke inwe ihe ịga nke ọma n'ihe mgbaru ọsọ ị na-achụ site ugbu a.
Ngwaọrụ dị elu- Ọ bụ na-ewu ewu na ndị ọhụrụ na ọnọdụ na oge a na ahịa ha na-adịkarịghị wupu site na ndị dị otú ahụ ike. N'ezie, ọ bụ nhọrọ ọzọ dị maka ụlọ ọrụ dijitalụ iji mezuo ebumnuche ha ozugbo. Ya mere, ị nwekwaghị ihe ngọpụ ka ị ghara igbochi onwe gị iche echiche banyere naanị ekwentị. Enwere ndụ karịrị ha.
Geolocation: Nke ọzọ a na - enye ndị ọchụnta ego nọ na ngalaba ahụ aka ịhapụ ụfọdụ iwu na - egbochi izipu ozi dị mkpa na oge kwesịrị ekwesị na ebe kwesịrị ekwesị. Ebe ị nwere ike iziga ndị ahịa gị ozi gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, na-enye ha ma ọ bụ akụkụ ọ bụla na-emetụta ọrụ nke ọrụ azụmaahịa gị. Site na usoro dị iche na nke ndị ọzọ.
AplicacionesNwere ike ịmaghị ya n'oge a ziri ezi, mana ọrụ teknụzụ a nwere ọtụtụ uru karịa ka ị si eche na mbụ. Ruo n'ókè ha na-enye gị ohere ịchekwa ọkwa mmekọrịta nke gị na ndị ọzọ so na usoro a.
Iwu maka iji usoro ahia a
Dị ka ị hụworo, ọrụ ya dị ọtụtụ ma ha ga-adabere na ọdịmma gị. Ebee ka ezi ngwangwa nke ekwenti gha aghaghi ibu akụkụ nke atụmatụ ahia marketing ọzọ zuru ụwa ọnụ. Iji mezuo ebumnuche kacha nta site na ịmepụta atụmatụ zuru oke na-emetụta ụlọ ahịa gị n'ịntanetị.
Akụkụ ọzọ dị mkpa dị na ya bụ eziokwu bụ na ị ga-anọ n'ọnọdụ zuru oke iji kewaa ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị. Na mwepụta nke mkpọsa ga-enwe nzube nke ịdọrọ na ntụgharị. Ọ gaghị abụ ọrụ dị mfe, mana iji obere mbọ na ịdọ aka ná ntị dị elu ị ga-enweta nsonaazụ, ọbụlagodi na ọkara na ogologo oge. Maka na ọ bụ na njedebe nke ụbọchị ka ihe niile gbasara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahịa » Gini bu ahia ahia?